घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, १९ जेठ
१९ जेठ २०५८ को रात । एउटा अप्रत्यासित र अकल्पनीय घटना भएको दिन नेपालको इतिहासमा । तत्कालीन राजाको सम्पूर्ण परिवारकै हत्या गरिएको दुखद् दिन ।
२ शताब्दी लामो शासन गरेको शाह वंशीय परम्परामा नमीठो ठेस लागेको दिन पनि हो उक्त दिन । एउटा वहालमा रहेका शासकको वंशनास हुनु विश्व राजनीतिक इतिहासमै कालो धब्बा त थियो नै, त्यसभन्दा बढी उक्त आमहत्या १९ वर्षसम्म रहस्यकै गर्भमा रहनु अर्को रमाइलो घटना बनेको छ ।
१ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनका क्रममा समेत तत्कालीन राजाहरूलाई खोपीभित्र वा पिञ्जडामा सीमित राखेर राणाले शासन गरेका थिए । तर, लोकतन्त्रमै, अझ संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक प्रणालीमै राष्ट्र प्रमुख, जो हजारौँ सुरक्षाकर्मीका घेरामा अतयन्त सुरक्षित ढंगले राखिएका हुन्छन्, उनको वंशनास हुनु र त्यो अझसम्म रहस्यमय हत्याका रूपमा रहनु साँच्चै रोचक र अपत्यारिलो घटना बनेको छ ।
तथापि, आमहत्या त भई नै सक्यो र उक्त घटनाका बारेमा तत्कालै छानबिन समिति बनेर समितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।
उक्त प्रतिवेनमाथि आमजनको रत्तिभर विश्वास छैन तर आमजनको अविश्वासले उक्त प्रतिवेदन परिवर्तन हुने कुरा थिएन । अझ अर्को छानबिन समिति बनाएर दरबार हत्याकाण्डको वास्तविकता बाहिर ल्याउने ह्याउ कुनै पनि सरकार वा शासकको देखिँदैन, छैन ।
उक्त रहस्यमय दरबार हत्याकाण्डका साक्षी जीवित पात्र अझै धेरै छन् तर त्यस घटनाबारे उनीहरू ‘तैँ चुप, मैँ चुप’को अवस्थामा छन् । किन यसरी चुप छन् उनीहरू ? यो झनै रहस्यको विषय बनेको छ ।
एउटा वहालवाला शासकको वंशनासका साक्षीहरूले यथार्थ नबोल्नु वा यथार्थ कुरा भन्न नचाहनुले एउटा राजनीतिक युग र एउटा असल शासकमाथि अन्याय भएको छ । राजा वीरेन्द्रलाई किन ‘असल शासक’ भनेको भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्न सक्छ, त्यसबारे तल प्रस्ट पारिएको छ ।
राजा वीरेन्द्र र उनको शासन
राजा वीरेन्द्र राजाको जेठो छोरो राजा हुने परम्परागत मान्यताबाट राजा भएका हुन् । उनका बुबा तत्कालीन राजा महेन्द्रको मृत्युपश्चात् २०२८ सालमा राजगद्दी आरोहण गर्नुपर्ने हो वीरेन्द्रले । तर, दरबारभित्रकै किचलोका कारण ३ वर्षपछि अर्थात् २०३१ सालमा मात्र शुभराज्याभिषेक गरियो उनको ।
यसको आन्तरिक कारण रहेछ- महेन्द्रका माहिला वा दोस्रा छोरा रहेछन् वीरेन्द्र । महेन्द्रकी ल्याइतेपट्टिकका छोरा कवि, गीतकार रवीन्द्र शाह जेठा छोरा रहेछन् । रवीन्द्रले शासनमा आफ्नो हक दाबी गरेपछि ३ वर्षसम्म त्यो विवाद मिलाउन समय लागेछ ।
अन्ततः वीरेन्द्र राजगद्दीमा बसे । बुबा महेन्द्रले शिशु प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेको एक दशक मात्र भएको थियो । २६ वर्षको ठिटोका काँधमा राज्य सञ्चालनको अभिभारा आइलागेको थियो ।
बुबाले सुरु गरेको निर्दलीय पञ्चायतलाई निरन्तरता दिनु उनका निम्ति चुनौती थियो । राजनीतिक दलहरूको तीब्र विरोधका बीच एउटा अपरिपक्व ठिटोलाई शासन टिकाइराख्नु कम सकस त थिएन नै । तर, बुबाकै सल्लाहकार र बुबालाई नै सरकार सञ्चालनमा सहयोग गरेकाहरूबाट वीरेन्द्रले धेरै सल्लाह, सुझाव र सहयोग लिए । सूर्यबहादुर थापा जस्ता राजनीतिका चतुर खेलाडीलाई साथमा लिएर जनमतसङ्ग्रहको नाटकमा बहुदललाई लोप्पा ख्वाइदिएर पुनः एक दशक निर्दलीय शासन गरे ।
तथापि, राजा वीरेन्द्रमा निकै लचकता देखिन्छ जनताप्रति । उनले आफ्ना पिताले जस्तो कठोर निर्णय भने राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताप्रति गरेनन् । जनमतसङ्ग्रहपछि दलहरूमा केही खुकुलो गरे ।
तर पनि दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध र निरङ्कुश शासनको अभ्यास त उनले पनि जारी नै राखे । खुला राजनीतिक वातावरण हुन दिएनन् । तर, त्यो अस्वाभाविक किन पनि होइन भने, उनी प्रत्यक्ष कार्यकारी राजा थिए- निर्दलीय व्यवस्थाका । अनि त्यस्तो व्यवस्थाको स्वभाव लोकतान्त्रिक प्रणालीको जस्तो खोजेर कहाँ हुन्छ ?
यद्यपि, राजा वीरेन्द्र शालीन, भद्र, दयालु र विद्वान् अनि विकासप्रेमीचाहिँ थिए । उनले देशभर यात्रा गरेर देशको र जनताको वास्तविक अवस्था बुझेर सोहीअनुसारका नीति र कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गरेका हुन् । विकेन्द्रीकरणलाई अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न पनि गरेका हुन् ।
जनआन्दोलनकै क्रममा पनि धेरै जनता मारिनुहुन्न भन्ने आसयले केही व्यक्तिको बलिदानीमै प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गरिदिएका हुन् । यस सन्दर्भमा एउटा भनाइ अझै छ, तथ्य हो वा होइन, त्यो भने अब इतिहासकै गर्भमा रहने देखियो ।
भनाइ के पनि छ भने, तत्कालीन समयमा २६ चैत २०४६ को रात ११ बजे राजा वीरेन्द्रले प्रजातन्त्र घोषणा गरेपछि त्यसको केही समयपछि रानी ऐश्वर्य निकै आक्रोशित बनिन् वीरेन्द्रसँग । ऐश्वर्य त्यति सजिलै प्रजातन्त्र दिने पक्षमा थिइनन् रे ! तर, राजा वीरेन्द्रले आन्दोलन जारी रहे निकै जनताको मृत्यु हुने ठानेर प्रजातन्त्र घोषणा गरेका थिए भन्ने केही तत्कालीन दरबार निकटहरू अझै सुनाउँछन् ।
यसै क्रममा विवाद हुँदा आफ्ना श्रीमान अर्थात् राजा वीरेन्द्रमाथि रानी ऐश्वर्यले गोली प्रहार गरेकी थिइन् भनिन्छ । तथापि, वीरेन्द्र आफ्ना मान्यतामा र निर्णयमा अडिग रहे र जनता पुनः ३० वर्षपछि खुला राजनीतिक वातावरणमा रमाउन पाउने भए । यो राजा वीरेन्द्रको सदासयता मात्र होइन, मुलुकको एउटा जिम्मेवार शासक र अभिभावक हुनुको साक्ष्य पनि हो ।
अर्को कुरा, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आधा दशककै वरिपरि मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको बीजारोपण भयो- माओवादीका नाममा । उक्त द्वन्द्व यसरी बढ्दै गयो कि केही वर्षमै देशभर आतङ्क मच्चियो । जनधनमाथि प्रहार हुने र मान्छे मार्ने क्रम तीब्र र व्यापक बन्दै गयो । मुलुकमा अप्रत्यासित सङ्कट पटक पटक निम्तियो उक्त द्वन्द्वका कारण ।
२०५७ सालतिर द्वन्द्व चरममा उक्लिँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा वीरेन्द्रसँग माओवादीविरुद्ध सैनिक परिचालन गर्ने प्रस्ताव राखे । उक्त प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरे । भने रे- ‘जो मरे पनि नेपाली मर्ने हुन्, सैनिक परिचालन हुँदैन ।’
हुनत त्यसबेला माओवादीले खुबै प्रचार गर्ने गरेको थियो- ‘हाम्रो राजासँग सुसम्बन्ध छ ।’ अनि रमाइलो के थियो भने, ‘राजासँग सुसम्बन्ध’ कायम राखेर माओवादी ‘राजतन्त्र फाल्ने’ अभियानमा थियो । यो अर्को पाटो होला तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको माओवादीलाई ‘लिट्टे’ बनाइदिने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका कुरालाई तथ्य मान्ने हो भने वीरेन्द्र जनताको हत्यामा वा मान्छेको हत्यामा कहिल्यै विश्वास नगर्ने जनप्रेमी र दयालु राजा थिए भन्न सकिन्छ ।
उनी अत्यन्त भद्र र शालीन थिए, यही कारण पनि राजा वीरेन्द्रमाथि धोकाधडी भयो भन्ने दरबार निकट केही व्यक्तिहरू बताउने गर्छन् ।
उनमा राष्ट्रप्रेम र स्वाधीनता अनि आत्मगौरव पनि प्रशस्त देखिन्छ । उनले आफ्नो राज्याभिषेकसँगै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न राखेको प्रस्ताव उनको शान्ति, स्वाधीनता र स्थिरताको एउटा प्रयास थियो । तर, छिमेकी भारतले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न र समर्थन गर्न चाहेन ।
२०४५-०४६ मा जनआन्दोलनका क्रममै भारतले दबाब स्वरूप लगाएको नाकाबन्दीलाई उनले हरअवस्थामा समाना गरे तर भारतसँग झुकेनन् । त्यही रिस भारतले अनेक प्रपञ्च रचेर राजा वीरेन्द्रमाथि पोखेर छाड्यो भन्ने पनि केही विश्लेषकहरू बताउने गर्छन् । उनको भारतसँगको सम्बन्ध त्यसबखतदेखि नै बिग्रिएको पनि भनिन्छ ।
अन्ततः राजा वीरेन्द्रको वंशनास हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड मच्चियो र त्यो आजका मितिसम्म रहस्यको गर्भमै रहेको छ ।
दरबार हत्याकाण्डपछिको राजनीतिक अस्थिरता
एउटा शान्त र स्थिर संवैधानिक शासकका रूपमा रबर स्ट्याम्प बनेर बस्न मञ्जुर गर्ने राजा वीरेन्द्रलाई अनेक प्रपञ्च रची उनको वंशनास हुने गरी सखाप पारियो । घटनाको वास्तविकता रहस्यकै गर्भमा छ । भनिन्छ कि युवराज दीपेन्द्रको एउटी युवतीसँगको प्रेम प्रसङ्गका कारण उक्त हत्या काण्ड भएको हो । र, हत्या युवराज दीपेन्द्रकै हातबाट भएको हो ।
तथापि, उक्त तर्कलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार कोही कसैले दिन सकेका छैनन् । यसबीचमा ‘प्रत्यक्षदर्शी’ केहीका पुस्तक नै आएका छन् उक्त हत्या काण्डबारे तर ती पुस्तकमा उल्लेख गरिएका तर्कमा पनि आमजन विश्वास गरिरहेका छैनन् ।
हत्या काण्ड त रहस्यमय नै बनिरहेको छ उक्त हत्या काण्डपछिको नेपाली राजनीति पनि अतयन्त अस्थिर, उद्दण्ड र अराजक बन्दै गयो ।
वीरेन्द्रको वंशनासपछि शाह वंशकै बचेका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई भावी राजा चयन गरियो । त्यसबेलै राजा वा राजतन्त्र फाल्ने आँट वा हिम्मत कुनै पनि राजनीतिक दलमा रहेन । अर्को कुरा त्यसबेलासम्म संवैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा थिए तत्कालीन संसदवादी राजनीतिक दलहरू । माओवादी भूमिगत सशस्त्र द्वन्द्वमै थियो ।
ज्ञानेन्द्र गद्दीमा बसेपछि आफ्ना बुबाको शासकीय गुण र महत्त्वाकाङ्क्षाका भूत उनमा सवार हुन थाल्यो । एकातिर राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट र विचलित बनिरहेका र अर्कातिर माओवादीको सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वले मुलुकलाई आतङ्कित र थिलथिलो पारेको तत्कालीन समयमा ज्ञानेन्द्रले बीचमा खेल्ने सुवर्ण अवसर पाए ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ घोषणा गरेर आफूखुसी मन्त्रीमण्डल गठन गरे । हुँदाहुँदा उनको सत्ताकाङ्क्षा २०१७ सालमा शिशु प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्न आफ्ना बुबा महेन्द्रले प्रयोग गरेकै तुल्सी गिरीलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नतिर लाग्यो ।
प्रत्यक्ष शासनको महत्त्वाकाङ्क्षाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई यति अन्ध बनायो कि उनको शासन र शासकीय अहं केही महिनाभित्रै ध्वस्त हुँदै छ भन्ने भेउ पाउन सकेनन् । अन्ततः सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादीसमेत आफ्नो ‘टाउको लुकाउन’ सात दलको ज्ञानेन्द्रविरोधी आन्दोलनमा सहभागी भयो र १९ दिनको जनआन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्र घुँडा टेक्न बाध्य भए । माओवादीसमेतले केही अंश संसदमा लिएर आफू सुरक्षित बन्यो ।
त्यसको केही समयपछि नेपालबाट राजतन्त्रको बिदाइ भयो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको शासन व्यवस्था सुरु भयो ।
संविधान निर्माणार्थ २ पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो निर्वाचनपछिको संविधानसभा यस्सै बित्यो, राजनीतिक दलभित्रका खिअचातानी, अन्तर्विरोध र द्वन्द्वका बीच । पुनः दोस्रो पटकको संविधानसभा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक दलबाट गराइयो । उक्त संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्‍यो ।
त्यसपछि सोही संविधानबमोजिम तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिले तीनवटै सरकार सञ्चालनमा छन् । तथापि, यसबीचका कुनै पनि ‘लोकतान्त्रिक’ वा ‘गणतान्त्रिक’ भनिएका राजनीतिक दल र तिनका सरकारले आमजनमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको अनुभूतिसम्म दिलाउन सकेका छैनन् ।
यसबेला यो सन्दर्भ किन जायज छ भने, मुलुकमा राजाले वा वंशका आधारमा शासन गर्ने पद्धतिले मुलुकको विकास भएन, जनताले हकअधिकार पाएनन्, जनताको जीवनस्तर उठेन, मुलुकको सर्वाङ्गीण हित भएन भनेर राजतन्त्र फालियो । राजालाई लगेर इतिहासमा सीमित पार्ने प्रयास गरियो । तर, के गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्षसम्म मुलुकले कुनै नयाँ परिवर्तन गर्‍यो ? जनताले केही नयाँ अनुभव गरे ?
सवाल राजतन्त्र फाल्नु वा राख्नुको होइन कि कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य के थियो ? उक्त उद्देश्य पूर्तिका निम्ति के भयो, के गरियो ? कसरी गरिँदै छ ? आदिमा छ ।
वास्तवमा विगतमा राजतन्त्रका समयमा एउटा परिवार अर्थात् शासक वर्ग मात्र हालिमुहाली गर्थ्यो राज्यकोषमा तर त्यसपछि जब गणतन्त्र घोषणा गरियो अनि सयौँ होइन, हजारौँ नयाँ राजाहरू जन्मिए र तिनका आसेपासेलगायतले समेत राज्यकोष दोहनमा तर मारे, मारिरहेका छन् । यस्तो अवस्था त १०४ वर्षे राणा शासनकालमा वा महेन्द्रको निर्दलीयकाल वा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वकाकाङ्क्षी शासनकालमा समेत नभएको विश्लेषकहरू बताउन थालेका छन् ।
अर्को कुरा, सामाजिक अराजकता, विभेद र हिंसामा राजतन्त्रमा भन्दा अहिले वृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिने भइसकेको यसबीचका घटनाले देखाउँछन् । हत्या, बलात्कार, जातीय र लैंगिक विभेद, घरेलु र सामाजिक हिंसा राजतन्त्रमा भन्दा अहिले कम छ र ? अनि देश विकासकै सवालमा पनि पछिल्ला सरकारका नीति र योजना कुन सा महान् र गतिला ल्याएका छन् र ! के नै पो योजना र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ र ?
सामाजिक हिंसामा ६० वर्ष पार गरेकी वृद्धलाई बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाइएकै छ, दहेज (दाइजो) नल्याएको निहुँमा छोरी चेली मारिएकै छन्, बलात्कारबाट निर्मला पन्त जस्ता किशोरीको हत्या भएकै छ, नवराज विकहरू जातीयताका नाममा मारिएकै छन् ।
सन्दर्भ दरबार हत्या काण्डको थियो ।
आखिर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएपछि पनि मुलुक कुनै नयाँ मार्गमा हिँडिरहेको छैन । जनताले कुनै नयाँ कुराको, नयाँ सम्भावनाको, नयाँ विश्वासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
उक्त हत्या काण्डपछि को कसको दुनो सोझियो ? को कसले के फाइदा पाए वा को कसले के लिनका निम्ति उक्त हत्या काण्ड गराइयो भन्ने विषय सधैँ रहस्यको विषय बन्ने देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १९, २०७७, १८:३६:००